नेकपा युवा नेतालाई खुल्ला पत्र : अब केपी ओलीलाई मुश्किल छ - Dainik Nepal
नेकपा युवा नेतालाई खुल्ला पत्र : अब केपी ओलीलाई मुश्किल छ
सिद्धिचरण भटराई २०७६ असार २४ गते ९:२८
प्रिय सूर्य थापा कमरेड अभिवादन !
तपाई खासमा खह्रो मान्छे हो । यस्तो मान्छे प्रायः सहि कुरा गर्छन् । उसको नीति र नियत लुक्दैन । सरकारबारे तपाई असन्तुष्टि जायज छन् । यही कुरा हामीले केपी ओलीको चल्ने प्रवृतिबारे आलोचना गर्दै शुरूदेखि नै सल्लाहकारहरू होइन प्रशंसक, एसम्यानहरूको घेरामा पर्दै गएको भन्दै आएका हौं । तपाई आज हाम्रो ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ । तपाईलाई स्वागत छ अब मिलेर पार्टी र सरकार सुधारौं, सुधार्नका लागि केही कार्ययोजना बन्नपर्छ कोशिष गरौं, सुध्रिएन भने नेतृत्व फेरौं । विकल्प यत्ति नै हो । म अब तपाईका केही अस्पष्टता बारे भने बोल्न चाहन्छु ।
१. पहिलो बुँदामा तपाईले नेकपाका केही नेता र सांसदहरूको आलोचनाप्रति मुख नमिठो पार्नु भएको रहेछ । ओलीलाई पार्टीको समर्थनमा नेता बनाइएको हो । उनले महाधिवेशनमा अध्यक्ष केही मतले जितेका हुन्, एकतापछि पनि सहमतिका अध्यक्ष हुन् । यसको अर्थ उनले एकलौटी चल्नु पर्छ भनेर दिइएको सहमति होइन । उनले सरकार र पार्टी चलाउँदा पार्टीभित्र न्यूनतम जनवाद, छलफल, संरचनागत प्रकृया कुनै अपनाउन चाहेनन् । हुँदाहुँदा सानो सचिवालय पनि चलेन उनकै नेतृत्वको संसदीय दल पनि चलेन । यसले सरकारले गरेका निर्णयको स्वामित्व पार्टी र सांसद कसैले पनि लिने अवस्था बनेन । यसैले गर्दा बिरोधको स्वर आफ्नै भित्रबाट बढि हुनु स्वाभाविक छ । यो नियोजित लाग्नु तपाईको गुटगत पक्षधरताको चस्मा हो कि ? त्यसो भए सच्चाइँ पाउँ ।
२. केपी कोठरी, प्रचण्ड र बादल कोठरीबाट फर्काएर पार्टीको टोकरीमा नीति र योजना नल्याउँदासम्म सनातन परम्पराका मन्त्री र सरकार चले जस्तै यो सरकार भिन्न हुन सक्दैन । दुई तिहाईले प्रबृति फेर्ने होइन कमरेड सांस्कृतिक चेतना, सैद्धान्तिक निष्कर्ष र अवस्थाको ठीक विश्लेषणले ल्याउने योजनाले मात्र मन्त्रिका कार्यशैली, योजना फेरिन्छन् । व्यक्तिले गर्ने १० प्रतिशत होला तर सैद्धान्तिक स्पष्टताले धेरै कुरा फेर्छ त्यो पार्टी र सरकारमा देखिएको छैन । यसैले बिरोध पार्टीभित्रैबाट उठ्नु स्वाभाविक छ । तपाईका स्टाटसमा दुई अध्यक्षको सहमति हरेक रुपमा समर्थन गर्न पार्टी एकता भएको होइन भन्न बुझाई कम छ ।
नेकपा युवा नेता सूर्य थापा
३. हाम्रै धरातलका हुन मन्त्री पनि सतहि ज्ञान सतहि प्रचार र सतहि योजना । अनुसन्धान र निष्कर्षमा आधारित योजना चाहिन्छ । चुनाव जित्न छ आफैने क्षेत्रबाट । आफनै हात जगन्नाथ नभएर के हुन्छ त ? ज्ञान जनतासंग छ, जनतामा जाउ सिक भन्ने कुरा हराएर ज्ञान मैसंग छ जनताले र कार्यकर्ताले त हामीबाट सिक्ने हो भन्ने मानसिकता भएपछि यस्तै हो । यिनलाई पार्टीभित्र सुद्धीकरणको भट्टीमा लिएर जाउँ र खारौं । लक्ष्य दिउँ उत्पादनको, गर्न नसक्नेलाई हटाउँ । सम्भव छ कमरेड ?
४. चीन र भारतका के कुरा गर्नु कमरेड, भारतमा हिन्दूवादी भएपनि कम्तिमा पनि एउटा आदर्शमा त हिँडेका देखिन्छन् । चीनमा पनि एउटा उच्चतम लक्ष्य र आदर्श बोकेका मानिस नेतृत्वमा छन् । बिधि छ, छलफल छ, गाउँको काउन्टीको कमिटीको पनि राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान पु¥याउने मात्रा तोकिएको लक्ष्य छ । हामी कहाँ के छ ? पार्टीहरूमाथिदेखि गुटका ईकाइमा भाग लगाइएका छन् । क्षमता भएका पनि गुट फरक परेपछि अयोग्य भईहाल्छ । कसरी हुन्छ चीन र भारतको जस्तो हामी कहाँ ?
५. तपाईले अपजस जति प्रधानमन्त्रीमाथि थोपर्ने कुराको आलोचना गर्नु भएछ । के अब पनि अपजस राजा ज्ञानेन्द्रले लिने ? जुँगा उखेलिएका शेरबहादुर देउवालाई दिने ? कोमामा परेक लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई दिने ? यो त असम्भव नै हैन र ? दुई तिहाईको प्रधानमन्त्रीले जस र अपजस दुवै पाउँछन् । सत्ताबाट बाहिरिएका र कम्युनिष्ट आन्दोलन नरुचाउनेहरूले गर्ने षडयन्त्रबारे मिडियामा रुने कुराको कुनै अर्थ छैन । यो उनीहरूको धर्म हो भनेर हामीले जान्दै र मान्दै आएका छौं ।
६. सरकारबिरुद्ध भ्रमको तुवाँलो सिर्जना गरिएको तपाईको दावीलाई तपाईले नै गरेको मन्त्रीहरूको आलोचनाले नै असत्य सावित गर्छ । यो सरकार र पार्टी सही ढंगले अघि नबढ्दा भएको हो । मन्त्रीको क्षमता भ्रमले गर्दा कमजोर भएको होइन कमजोर भएर जनतामा निराशा आएको हो । स्पष्ट हुनुस् ।
७. भ्रष्ट, दलाल र माफियासंग सरकारले दुरी बढाएन भनेर तपाईले गरेको गुनासो सतप्रतिशत ठीक हो । कमरेड घनश्याम भुसालले माक्र्स जन्मसतबार्षिकी कार्यक्रममा दिनमा सय जना दलालसंग पार्टी अध्यक्ष र नेताहरू ठोक्किएपछि त्यही पार्टीको सरकार कसरी त्यसबाट अछुतो रहन्छ भनेको तपाईलाई यादै होला । जुन आजको यथार्थ तस्बीर हो ।
८. नेकपाको डुंगा डुब्दा सबै डुब्छौ यही चिन्ताले नै हामीभित्र छटपटी बढेको । तपाईलाई जस्तो छटपटी छ हामीलाई पनि उस्तै हो । डुंगाका चालकहरू मदहोसमा भए भने होसमा ल्याउन सवाररत यात्रुपनि चिच्चाउन पर्छ हैनर ? केपी–प्रचण्डलाई मदहोसबाट ब्युँझाउन जरुरी छ । यदी मुख्य चालक थाक्यो, पाटियो भने चालक फेर्न पनि जरुरी छ । यो सवारत यात्रुको माग र मनोविज्ञानमा आधारित हुन्छ । डुंगामा सवाररत यात्रुको मनोविज्ञानमा सुरक्षित अवतरणमा शंका उत्पन्न भए चालक फेर्नुको विकल्प छैन ।
प्रिय सूर्य जी, नागरिक तहमा आएको बेचैनी हाम्रै सरकारका कार्यशैली र नीतिविहीनताका कारणले हो, पार्टी र सरकारको सहि सन्तुलन मिलाउन नसक्नुका कारणले हो । के यो सतबुद्धि आएको होला नेताहरूमा । बालुवाटमा रमाईरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सल्लाहकारहरूलाई ? र अन्तमा म चाहन्छु यो सरकार ५ वर्ष टिकोस् तर यही तरिकाले त हामीलाई अब दुई महिना पनि थेग्न गाह्रो छ । यही पारा, यही तरिका, सरकारी कामको पार्टीगत समीक्षा नहुने हो र नसुध्रिने हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ईश्वर नै आएपनि बचाउन मुस्किल छ । सुध्रौ कमरेड सुध्रौ । अझै समय घर्कीसकेको छैन । घर्कीदैछ । डुंगा बचाउन सकिन्छ सहि अवतरण गराउन सकिन्छ । ध्यान ठीक ठाउँमा लगाउँ । अस्तु ।
तपाईको मित्र सिद्धिचरण भटराई